गृहपृष्ठ भिडियो, मनोरञ्जन, मुख्य समाचार, समाचार
काठमाडौँ । नेपाल आइडलबाट चर्चा कमाएका निशान भट्टराई आफ्नी श्रीमतीसँगै धुलिखेलमा जिपलाइन खेल्न पुगेका छन् । कोरोना महामारीले देश नै ठप्प भएका बेला यो जोडी भने छुट्टिको फाइदा उठाउँदै श्रीमतीसँगै धुलिखेलमा जिपलाइन खेल्न पुगेको भिडियो...बाँकी
मोडल निशा घिमिरेको उपचारको लागि सहयोगी हातहरु बढ्न थालेका छन् । अभिनयमा डिप्लोमा गर्न भारत जाँदै गर्दा देहरादुनमा सडक दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएकी उनको अहिले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । पैसा अभावका...बाँकी
हिन्दुधर्मको अपमान गर्नेहरु ८० % माथि नेपाली जनतालाई अपमान गर्नेहरु हुन : करिश्मा मानन्धर
अबको दुईवटा जनगणनापछि ८० प्रतिशतमाथि रहेका हिन्दुको संख्या ८ प्रतिशतमा झर्ने छ । सदाबहार सुन्दरी नायिकाको उपमा पाएकी नायिका करिश्मा मानन्धरले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत बेला बेलामा आफ्नो धारणा राख्दै आएकी छिन् । यसै क्रममा आज...बाँकी
विगत केही वर्षअघि देखि निकै नै नेपालीहरुबिच सामाजिक संजाल टिकटक निकै नै लोकप्रिय छ । यहांं सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छ । कति मानिसहरु यहाबाट निकै नै भाइरल बनेका छन । त्यस्तै कयौ...बाँकी
यस्ता यस्ता भिडियो बनाएपछि रातारात भाइरल – को हुन यिनी ? (भिडियो सहित)
धनकुटा । टिकटकको भाईरल निशाना अहिले धनकुटा तर्फ फर्किएको छ । धनकुटाकी लक्ष्मी बिष्ट रातारात टिकटकमा भाईरल भएकी छिन । भाईरल बन्दै गएको उनको भिडियो ४ दिनमा झण्डै ४ लाखले हेरिसकेका छन भने २६ हजार...बाँकी
‘ग्राहक’सँग लाखौं लिने यी नायिकाको यस्तो ‘धन्दा’, भन्छन्, ‘लकडाउनले काम नपाएपछि गरेका हौं’
नयाँ दिल्ली – कोरोना प्रकोपले मानिसका आवश्यकता थपिएका छन्। रोजगारी पुगेको छ। परिस्थिति बदलिएको छ।भारतको ठाणेको पाचापाखडी इलाकामा रहेको एक घरमा खलासी लिएर भारतीय प्रहरीले ‘यौनधन्दा’को ‘पर्दाफास’ गरेको छ। त्यहाँबाट प्रहरीले दुई अभिनेत्री, दुई महिला...बाँकी
पुर्व अधिकारजकुमार धिरेन्द्र शाहको कान्छी छोरी उशाना लैला ‘बबा’ शाहको चर्चा नेपालमा चुलिदैँ गएको छ । राजा महेन्द्र विर विक्रम शाहका कान्छा छोरा धिरेन्द्रले तीनवटा विवाह गरे । उनको तीन श्रीमतीबाट ५ छोरीहरु छन् ।...बाँकी
अहिलेका युवा युवती हरु सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताउने गर्छन् । कसैले यसको राम्रो सदुपयोग गर्छन् त कसैले समय कटाउने माध्यम मात्र बनाउँछन् । सामाजिक सञ्जाल आफ्ना कला, प्रस्तुति र लेख रचना हरु प्रस्तुत गर्ने...बाँकी
यसरी टिकटक बनाऔं पैसा कमाऔं तर कसरी ?
नेपालबाट सञ्चालन भएका टिकटक एकाउन्टहरुबाट पनि अव आम्दानी हुने भएको छ । यही २०७८ साल जेठ ७ गते शुक्रबारदेखि रिलिज नेपाल प्रा. ली. ले टिकटक एकाउन्टहरुको भेरिफिकेसनका लागि काम थाल्ने भएकाले नेपाली टिकटकबाट पनि आन्दानी...बाँकी
हरेक व्यक्तिले आफ्नो सुखी वैवाहिक जीवनको कल्पना गर्ने गर्छन् । विवाह अघि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कि उनीहरुको सम्बन्ध कति दिन, कति महिना वा कति वर्षसम्म चल्दैछ । दुई व्यक्ति जब सँगै हुन्छन् तब उनीहरुले...बाँकी